Musuq-Maasuq Save the Children, Diridhaba – Xeernews24
Musuq-Maasuq Save the Children, Diridhaba
14. September 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Xafiiska Save the Children ee Diridhaba sidaan horay u sheegay musuqu wuxu gaadhay heer argagax leh. Mashaariic malaayiin Birr ah oo siday u dhanyihiin xafiiska lagu xisaab-xidho iyadoo lagu jiray xilligii abaarihii ba’anaa ee Gobolka Sitti halakeeyay , waxaaba kasii yaab badan in xitaa cashuurihii yaraa ee ka go’aayay mushaarka shaqaalaha laga tegi waayo. Ma jirin xafiis dawladeed oo si habboon u dabagala guud ahaan cashuuraadka waajibaadka ah ee ay hay’addu ururiso (Employee income tax and purchase withholding tax) sidaas darteed waxay maamulka Save the Children ee Diridhaba kolba heshiis qarsoodi ah la gali jireen dhowr ka mid ah madax-xafiiseedyada Dakhliga ee sagaalka degmo ee Gobolka Sitti. Kolba madax-xafiiseedkii keeni kara warqad lacag-qabasho (receipt) oo lagu xisaab-xidhi karo lacagta ayaa dabadeedna lacagta lala qaybsani jiray , Caddaymahan hoose waa lacag cashuur ah oo laga jaray mushaarka shaqaalaha kadibna heshiis wax kala qaybsi ah lagula galay madaxii xafiiska Dakhliga ee degmada Danbaleed Cumar Boongo oo isagu ahaa shaqaale hore oo Save the Children ah. Barbaartu dadaal dheer kadib waxay keeneen caddaymahan hoose:
1. Warqadahan waxa laga jaray buug qarsoodi ah oo aan u duwaan-gashanayn xafiiska Dakhliga ee degmada Danbaleed. Waxa jeebka ku wadani jiray madaxii Dakhliga ee degmada Mudane Cumar-Boongo.
2. Warqadda koowaad tirsigeegu waa 7335 waxana la jaray 28/02/2016 halka tan labaad oo tirsigeegu yahay 7336 la jaray 31/01/2016 ????? Siday wax yihiin??? Caadiyan waxay ahayd in horta la jaro warqadda tirsigeegu yahay 7335 kadibna 7336. Warqadda saddexaad tirsigeegu waa 7347 waxa la jaray 30/10/2016 oo ku beegan toddoba bilood kadib markii la jaray warqadda koowaad. Waa yaabe buuggan wax kale loomaba isticmaali jirin miyaa aan ka ahayn cashuurta mushaarka shaqaalaha Save the Children?
3. Dhammaan lacagahan waxa lagu kala qaatay naqdi (cash) taas oo baal-marsan sharciga hay’adda ee dhigaya in caddad kasta oo lacageed oo ka badan Shan Kun oo Birr lagu bixiyo jeeg ama xawilaad bangi.
4. Dhamman warqadahan lacag-qabashada waxa loo ekaysiiyay inuu jaray Cabdi Jibriil oo ka mid ahaa dakhli-ururiyaasha Danbaleed balse farta lagu qoray xitaa isku mid maaha. Labada hore waxa fartiisa ku qoray Cumar Boongo, tan saddexaad nooma suuroobin inaan helno magacii qofka qoray laakiin waxaan xaqiijinay inuu ahaa qof uu Cumar ka codsaday inuu qoro si aan farta loo garanin.
5. Lacagahan iyo dhammaan kuwii kale ee jaritaankooga loo isticmaalay buuggani ma galin akawnka bangiga ee Degmada Danbaleed mana galin qasnadda degmada. Waxa toos u qabsaday Cumar Boongo iy Maareeyaha Save the Children ee Diridhaba.
Wali Musuqii Degmooyinka ay wadaagayeen baan kudaba jirnaa Degma walba (no musuq )
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/09/shildren.png 225 225 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-14 00:11:592018-09-14 00:11:59Musuq-Maasuq Save the Children, Diridhaba
R/W Abiy Ahmed Oo Si Cajiib Ah Uga Hadlay Badelida Calanka Dawlad Deegaanka... Micheal Keating muxuu Soomaalida ka yidhi “Carab ma aha, Afrikaanna ma aha,...